I-China kuya e-Ireland-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Inkomba Yezinsizakalo>Izilwandle ZaseMedithera Nezimnyama>China ukuya e-Ireland
Kuthunyelwa kusuka eChina kuya e-Ireland
Uma ufuna umgibeli onokwethenjelwa wezimpahla osiza ukuthunyelwa kwakho kusuka eChina kuya e-Ireland, usesendaweni efanele.
Noma insizakalo yokuthumela esuka eChina iya e-Ireland isivuthiwe kakhulu kulezi zinsuku, abakwa-SHL bangahlala bezama ukwenza umsebenzi wokusebenza kahle kangcono, ngaphandle kwesixazululo esihle kakhulu kanye nensizakalo enhle, singanikeza namanani wokuncintisana asuka eChina aye e-Ireland.
I-SHL izosiza ukukhetha kwakho indlela ehamba phambili yokuthumela, izindleko zokuthumela ezincintisanayo nezinkampani ezihamba phambili zokuthumela ukusiza ukuhambisa kwakho kusuka eChina kuye e-Ireland.
I-China European Road Transport kusuka eChina ukuya e-Ireland
Isiteshi sesine sempahla phakathi kweChina neYurophu ngemuva kokuhamba komoya, ulwandle kanye nojantshi. Ingaphesheya kwezwekazi lase-Yurobhu ethekwini laseChina, elidlula ngo-kazakhstan, iRussia, iBelarus nePoland ukuya e-Ireland, izwe eliseYurophu.
I-China Railway Express esuka eChina iya e-Ireland
I-SHL ihlinzeka ngojantshi ozinzile wesitimela phakathi kweChina ne-Ireland ngezimpahla zokuthumela zeFLL neLCL, izinto zephrojekthi ye-One Belt ne-One Road ukuthola izixazululo ezenziwe kanye nokungenisa izinto kwamanye amazwe futhi singakwazi ukuxazulula izinkinga zokuvulwa kwamasiko eChina.
Ukuhanjiswa Kwempahla Yomoya kusuka eChina kuya e-Ireland
Kuneziteshi eziningi zezindiza zamazwe omhlaba eziyisisekelo e-Ireland futhi kunezimpahla eziningi zokuthumela ezivela eChina ziya e-Ireland ngendiza, i-SHL inganikeza umthwalo wokuncintisana womoya ophansi kakhulu kunemakethe kwikhasimende lethu ngokusekelwe ohlelweni lwakho lokufuna.
Ukuhamba ngeRo-Ro / Break Bulk kusuka eChina kuya e-Ireland
I-SHL inganikeza i-RORO ROROMAFI BREAKBULK ngemishini enembile, izimoto nemishini esindayo kusuka e-China kuye e-Ireland Singanikeza izixazululo zokuma kanye nezinkinga ezihambelana nazo.
Ukuthuthwa Kwasolwandle Okuthutha Usuka eChina kuya e-Ireland
I-SHL inenqwaba yokuqina kwezimpahla zokuthumela isuka eChina iye eFelixstowe, eSouthampton, njll. Ukuze njalo sikwazi ukuthola umthwalo olwandle oluya ethekwini lase-Ireland kusuka kubantu abathwali abaningi, futhi futhi singakwazi ukuqiniseka ukuthi indawo yesitsha ingakanani ngenkathi yesikhathi esiphakeme.
Door to Door Service China ukuya e-Ireland
Ngokusebenzela umnyango nomuzi, abakwa-SHL bangenza imvume yamasiko ngokushesha e-Ireland futhi balethe izimpahla zokuthumela egumbini lokugcina lamakhasimende ethu, Ngaphandle kwalokhu, uma ungumuntu siqu, abakwa-SHL banenkampani yezohwebo abangaba ngummeli we-BL futhi bakusize ungenise ukuthunyelwa izimpahla ngempumelelo.
I-China ibanga elingamakhilomitha angama-7,775 ukusuka e-United Kingdom kodwa ukudabula leli banga kungathatha isikhathi eside ngenxa yemizila yolwandle echazwe yimizimba yamanzi.
Ngaphambi kokukhetha le ndlela yokuthumela, kufanele azi kahle amachweba ahlukene eChina nase-Ireland.
Izikhumulo Sezindiza Eziyinhloko e-Ireland
Isikhumulo sezindiza i-Dublin Isikhumulo sezindiza i-Shannon
Isikhumulo sezindiza i-Cork International
Izinhlobo Zokuthumela kusuka eChina ukuya e-Ireland
Noma nini lapho ungenisa usuka eChina uye e-Ireland, ungakhetha izindlela eziningi zokuthumela.
Yiliphi itheku okufanele ngilisebenzise ukuhambisa ngomkhumbi ukusuka eChina liye e-Ireland?
Ngoba udinga itheku elingakuxhumanisa ngqo ne-Ireland
Yisiphi isikhathi esiphelele esithathwa ngomkhumbi sisuka eChina siye e-Ireland?
Ngamafuphi, ungazicijisa kuzo zonke lezi ukuthola sonke isikhathi esizothatha umkhumbi usuka eChina uye e-Ireland
Abahambisi bezimpahla abanjalo bayayazi imithetho nemigomo elawula ukungenisa ezweni kusuka eChina kuye e-Ireland